BBC Somali - Warar - Hoos u dhaca weerarrada burcad badeedda
Hoos u dhaca weerarrada burcad badeedda
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 22 Oktoobar, 2012, 12:35 GMT 15:35 SGA
Warbixin ay soo saartay Hay'adda Badmaaxayaasha Adduunka ee IMB ayaa lagu sheegay in tirada weerarada burcad badeedda Soomaaliya ay hoos u dhacday oo ay gaartay meeshii ugu hooseysay tan iyo sanadkii 2009-ka.
Laakiin waxa ay ka digtay hay'addu in maraakiibtu aanay is dhigan oo ay foojignaadaan marka ay marayaan biyaha khatarta badan ee Soomaaliya u dhaw; sida Gacanka Cadan iyo Badda Cas, isla mar ahaantaana waxaa afduubka iyo weerarada burcaddu ay ku sii badanayaan Gacanka Guinea.
Weerarrada burcad badeedda Soomaalida ayaa hoos u dhacay sanadkan
Guud ahaan dunida, burcad badeedda ayaa waxay sanadkan dileen ugu yaraan lix shaqaale oo ka mid ahaa shaqaalaha marakiibta, waxayna afduubeen 448 badmaaxayaal.
Ururka caalamiga ah IMB ee arrimaha badmaaxayaasha, ayaa waxa uu sidoo kale ku waramayaa in burcad badeeddu ay isku dayeen in ay afduubaan ugu yraan 125 markab, waxaa u suura gashay in ay afduubaan 24 markab, waxayna warbixinta intaasi ku daraysaa in ay ku guul daraysteen in ay afduubaan 58 markab.
Hoos u dhaca falalka burcad badeeda ee Soomaliya ayaa waxa la sheegaya in ay hoos u dhigtay tiradii guud ee caalamka ee weerararda burcad badeedda oo gaartay 233 dhacdooyin sannadkii la soo dhaafay- waana tiraddii ugu hooseysay tan iyo 2008-dii. Sagaalkii bilood ee sannadkan 2012 waxa soomaliya ka dhacay 70 weerar, marka la barbardhigo 2011-ka oo ay Soomaaliya ka dhacday 199 weerar.
Hay'addan IMB waxay sheegaysaa in ilaalada hubaysan ee ay qaataan marakiibta caalamiga ah, ay gacan ka geysatay in la is hortaago falalka burcad badeedda.
Captain Pottengal Mukundan, oo ah agaasimaha hay'adda IMB, oo ah hay'add la socotay dhaq-dhaqaaqa burcad badeedda Soomaaliyeed tan iyo 1991, ayaa waxa uu sheegay in ay wannagsantahay in ay hoos u dhacday weeraraddii burcad badeedda ee Soomaaliya, balse waxa uu ka digay in weli biyaha Soomaaliya yihiin kuwa aad halis u ah, loona baahanyahay in la sii wado ilaalada xeebaha Soomaaliya iyo meelaha ka baxsan.